တစ်ပင်ရွှေထီး (အပင်) - ဝီကီပီးဒီးယား
USDA Plants Profile Archived 29 August 2011 at the Wayback Machine.
GRIN Species Profile Archived 28 September 2012 at the Wayback Machine.
Botany Photo of the Day Archived7October 2009 at the Wayback Machine.
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=တစ်ပင်ရွှေထီး_(အပင်)&oldid=654062" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၁၀ မေ ၂၀၂၁၊ ၁၈:၂၂ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။